Dhaabini Dhaabbii Hin Qabne faayidaa Hin Qabu -
Damee Boruu: Muddee 14, 2019
From OPDO to ODP, from ODP to PP within a year. What is the next, from PP?
Bara keessa jiru kana dhaabbolii baayyeen maqaa Uummata Oromoon ijaaramanii akka socho’aa jiran agarra. Warra kana keessaa ABO, KFO, PBO fi OPDOn (utuu hin diigamiin dura) Gaadisaa Hoogana Oromoo akka dhaabatan himatanii turan. Ammaan kana maalitti akka jiran waan adda baafnee beeknu hin qaabnu. Rakkinni Impaayeera Itoophiyaa akka waan filmaatan hiikamuu hunduu filmaataa wixxifachaa jiraachuu malee gidiraa uummatni keenya keessa jiruuf kan ifa bahee dubbatuuf hin jiru.
Filmaatan rakkina Impaayeera Itoophiyaa hiikun dhugaa irraa fagoo jira. Rakkinni Impaayeera Itoophiyaa rakkina garboofataa fi uummata garboome jidduu jiru dha. Uummatni qawween garboome qawween duwwaa bilisa of baasa. Dhugaa fi Haqa qabatamaa lafa jiru kana jala sararree ifatti waliif himuu qabna. Yoo dhugaa kana waliif himnee irratti hin qabsoofne uummata keenya bara baraan burjaajesinee rakkina hiikaa hin qabneef saaxiluu taha.
Dhugaan jiru utuu beeknu namoonni tokko tokko “nutti gola keessatti wal gorfanna, wal qonxonna” malee walatajjii irratti wal hin himannuu jedhan yaroo dubbatan ni dhaga’ama. Garuu waa’een uummata Oromoo dhoksaatti dubbatanii waan gadi bahan tokko akka hin jire ni beekna. Akkuma gaafa Malasaa Zeenawii sana jiraachuuf waan gochuu qaban itti himamee akka bahan biyya hundatu beeka.
Utuu dhugaa dubbachuu kan danda’u tahee ABO utuu miseensonni isaa (hoogantoota ijaarsa dabalatee) kumaatan mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiranii yaroo MM Konoonel Abiyii badhaasa nageenya isaa irratti namni siyaasaaf hidhame tokko hin jiru yaroo jedhu afaan qabatanii ilaaluu? Uummata Oromoo RIB Boranaa, Gujii, Wallagaa fi Waloo keessatti ajjeesaa oolu namni argu hin jiruu? Qabeenyaa uummata keenya barbda’aa jiruu fi nageenya boraa jiruuf kan itti gaaftamu MM Impaayeera Itoophiyaa Konoonel Abiyi miti akka tahe namni haalu jiraa?
Namni kun nama ijoollumaa isaa jalqabee EPRDF keessatti dhiiga ilmaan Oromoon dhngalaasaa guddate. Harka isaa dhiiga ilmaan Oromoo dhiqachaa amma aangoo dhunfatu gahe. Erga aangoo dhunfatee kaasee sayni uummata Oromoo lafa irraa dugugaa balleessuuf hammenya fokkisaa raawwachaa jira. Tuffii uummata Oromoof qabuuf jecha yoo warri Habashaa isa yaadachiisan malee Afaan Oromoon uummata keenya kijibuun iyyuu isatti jabaachaa jira. Aangoon yaroo nama macheesu waan baayye nama dagachiisa.
Dhaabboliin Oromoo jira jedhan dhugaa jiru kana uummata addunyaa fi Uummata Oromoo ibsuu maaliif lagatan? hin dagatan immoo ni sodaatan? Reefi bartoota ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan Yuniversitii Naannoo Amaaraa keessa gara Oromiyaatti fe’amaa jirus argaa hin jiranii? Amma isaan filmaata kana raawwatan itti ijoolleen Oromoo achi itti qabiyee qabamtee dhumuu qabdii? Deebii gaafille kana Uummatni Oromoo isaan irraa dhaga’uu barbanna.
Uummatni Oromoo akka mootummaa isaatti hin iyyanne mootummaa hin qabu. Mootummaan Naannoo Oromiyaa tooftan diigamee jira. Sababa PPiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa diiguun akeeka mataa isaa danda’e qaba. Guyyaa har’a Impaayera Itoophiyaa keessa naannoon mootummaa hin qabne Oromiyaa qofa akka tahe ifa jira. Kunis qabeenya uummata Oromoo abbaan barbaade akka barbaadetti akka saamuu fi ilmaan Oromoo abbaan barbaade bakka argetti akka ajjeessu haal mijjeessee jira. Kanaafuu yaroo bartoonni Oromoo ajjeefamtu, shimalaan tumamtu, qorra keessatti beelaa fi dhukkubaaf saaxilamtu, yaroo fooqii irraa darbamtu uummatni keenya ilaalee boo’uu malee Mootummaa itti iyyatu hin qabu.
Yoo warri dhaaba qabna jedhan kun dhaabbii fudhatanii dhugaa uummataaf hin dhubannee tahe jiraachuun isaanii faayidaa maalii qaba? Karaa koo mootummicha caalaa an isaan ittiin qaana’aan jira. Dhugaa jiru dubbatanii waan gad dhufee haa dhufu. Ni tura malee silaas dhufuun isaa hafaa hin jiru. Waan fedhetu taha malee Mootummaan Impaayera Itoophiyaa aangoo tolan dabarsee nama laatee akka hin beekne hubatamuu qaba. Amma aangoo qabannu rakkinaa fi cinqii uummata keenya irra gahaa jiru yoo hin iyyannuuf tahe uummatni keenyas humna isa qabu filachuuf akka dirqamu hubachuu qabna.
Akka biqiltuu warqee humna qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa margetu jira. Uummatni Oromoo biqiltuu kana karaa danda’u maraan kununseefatee guddifachuun dirqama isaa ti. Salphina Uummata Oromoo itti hagugsame kana humni irraa molqee kaasu WBO dhuwwa dha. Uummatni Oromoo biyya keessaa fi ala jiru WBO mararsiifachuu fi gargaaruun dirqama isa duraa tahuu qaba. WBOn Uummata Oromoo malee fira biraa hin qabu. Diinni uummata Oromoo WBO fi uummata Oromoo gargar baasuuf shira barbaade yoo xaxe iyyuu hin milkaa’u. WBOn hundee Raayaa Itiisa Biyyaa Oromiyaa waan taheef waan qabnu hundaan duba hirirree akka diina keenya injifatu gochuu qabna.
Rakkinni guddaan bara baraan argaa jirru ayyaan -ilaalatoota uummata isaanii gananii diina wajjin dhaabbatan arguu dha. Kan karaa, laga, gara, manaa fi eenyummaa keenya diinaaf saaxilu warra kana. Waraanni diinaa fuula duraan waan nutti dhufuuf agarree of irraa qolanna. Warra gaaduu fi gantuun garuu nu fakkaatee dugda keenya duubaan gaaga’ama nu irraan geessi. Gaaduu fi gantuu of keessa qululleessuun barbaachisaa dha. Basaastota yoo of keessa qulqulleesine qabsoon keenya ni salphataa. Ilmaan Oromoo biyyaa fi uummata isaanii agartuu ijaa tahan iyyuu akka baala muka irraa harca’aa jiru. Basaastonni dhiiga uummata isaan daldalaa jiran yoo du’uun miidhaa hin qabu. Garuu utuu tarkaanfii irratti fudhatiin hojii isaanii fooksaa kana irraa akka dhaabbatan itti himuu fi dabaltan karaa nama fira isaanii tahee dhaamsa dabarsuunii gaarii natti fakkaataa. Irree tokkoon harka wal qabannee yoo WBO wajjin dhaabbanne injifannoon fagoo hin jirtu. Yaa Uummata Oromoo fira biraa hin qabnu. Waliif haa dirmanu. WBOn gaachana keenya tokkummaan keenya humna keenya.
← Ajajaa WBO Zoonii Lixaa: ‘Qabsoo nagaatti deebi’uuf qabxiiwwan ijoo dhugaatti guutamuu qaban jiru’ Gabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’ →